5 +5=5သင်ခန်းစာ – Gentleman Magazine
စဉ်းစားမိကြမှာပါ။ စာရေးသူဟာ ရူးများရူးနေသလား?? ၅ နဲ့ ၅ ပေါင်းတာ ၅ ရတယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
မေးခွန်းလေးတစ်ခု မေးကြည့်ပါမယ်။ သင် သင့်အတွက်လကာလရှည် စီမံကိန်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်နှခေါက် ကြားဖူးပါသလဲ?? ပြီးတော့ အဲဒိစီမံကိန်းအောင်မြင်ဖို့ အဲဒိ ကာလရှည်တစ်ခုလုံး အာရုံစူးစိုက်ထားရမယ်ဆိုတာ ဘယ်လောက် ကြားဖူးပါသလဲ။ ဒီစာထဲမှာ ကျွန်တော်ဟာ ငါးနှစ် စီမံကိန်းတစ်ခုကို ချပြမှာ ဖြစ်ပြီး သင်ဟာ အဲဒိစီမံကိန်းကို အောင်မြင်နိုင်သလားဆိုတာပါ ပြောပြပေးသွားမှာပါ။ အပေါ်က အီကွေးရှင်းမှာ အဖြေ ၅ ဟာ သင့်ရဲ့ ပန်းတိုင် ဖြစ်ပြီး ၅ + ၅ ကတော့ ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ လျှို့ဝှက်ချက်ပါပဲ။
အီကွေးရှင်းက ပထမ ၅ ဟာ သင့်ရဲ့ မိတ်ဆွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ငါးယောက်ပါ။ သင်နေ့တိုင်း ဆက်ဆံနေရတဲ့ အရင်းနှိးဆုံးလူ ၅ ယောက်ကို စာရင်းလုပ်ပြီး သင်နဲ့ သူတို့ ရည်မှန်းချက် တူသလား။ ရည်မှန်းချက်တူရင်တောင် တိုးတက်မှု ရှိနေသလား ကြည့်ပါ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သင်က သင့်အနားမှာ ရှိနေသူတွေနဲ့ ပုံစံတူ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ၁၀၀ ရာနှုန်း ရှိနေလို့ပါပဲ။ ဥပမာ သင်က ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာ ချင်သူဖြစ်ပြီး သင့်ဘေးနညးကလူတွေက ဆေးလိပ်ထိုင်ဖွာပြီး တစ်မိနစ်လောက် အလုပ်လုပ်ရမှာကို ပျင်းနေသူတွေ ဆိုရင်တော့ သင့််ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့ ရာနှုန်းဟာ သုညနား နီးသွားပါပြီ။
လူတော်တော်များများ သူတို့ရည်မှန်းချက်တွေကို မရောက်ရတာက သူတို့ သူငယ်ချင်းတွေက သူတို့ခြေထောက်ကို ဆွဲထားလို့ပါပဲ။ ရည်မှန်းချက်တွေ သတ်မှတ်ပြီးတာနဲ့ သင်နဲ့ ရည်မှန်းချက် တူသူတွေနဲ့ သင့်ကိုယ်သင် ဝန်းရံထားလိုက်ပါ။
ဒုတိယ ၅ ကတော့ သင် နောက်ဆုံးဖတ်ဖူးတဲ့ စာအုပ် ၅ အုပ်ကို သင့်အိတ်ထဲ ထည့်ထားလိုက်ပါ။ အပျော်အနေနဲ့ သင့်သူငယ်ချင်းတွေ တစ်ခုခုအကြောင်း Complain တက်ရင် သူတို့နောက်ဆုံးဖတ်ဖူးတဲ့ စာအုပ် ငါးအုပ်က ဘာလဲဆိုတာ မေးကြည့်ပါ။ အဖြေ ၂ မျိုး ရလာပါလိမ့်မယ်။ မမှတ်မိဘူး။ ငါ့မှာ စာဖတ်ဖို့ အချိန် မရှိဘူး။
သင် နောက်ဆုံးဖတ်တဲ့ စာအုပ် ၅ အုပ်ဟာ သင့်ဘဝရဲ့ ပန်းတိုင်နဲ့ ဦးတည်ချက်ကိုအဆုံးအဖြတ် ပေးသွားမှာပါ။ ပုံမှန်လူတစ်ယောက်ဟာ ပျှမ်းမျှ တစ်နှစ်ကို စာတစ်အုပ်နှုန်းသာ ဖတ်ပါတယ်။ အဲဒါက ၉၅ ရာနှုန်းသော လူတွေ အသက် ၆၅ နှစ်မှာ နွမ်းပါးရတဲ့ အကြောင်းရင်းပါ။ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကွန်ပျူတာတောင် အလုပ်လုပ်အောင် ပရိုဂရမ် ရေးပေးရပါတယ်။
ကျွန်တေယ်တို့ အားလုံး အမြင့်ကို ရောက်ချင်တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သင် နေ့တိုင်းဖတ်နေ၊ နားထောင်နေတဲ့ အရာတွေက သင် ဘယ်လောက် အမြင့်ရောက်နိုင်လဲဆိုတာ အဆုံးအဖြတ်ပေးနေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ငါးနှစ် စီမံကိန်း ပန်းတိုင်ကို အာရုံစိုက်ထားပြီး သင်ဖတ်တဲ့ စာအုပ် ၅ အုပ်၊ သင့်အနားက သူငယ်ချင်း ၅ ယောက်က အဲဒိပန်းတိုင်ကို ရောက်မရောက် အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားမှာပါ။ အောင်မြင်မှုဆိုတာ ရိုးရှင်းပေမယ့် မလွယ်ကူပါဘူး။
5 +5=5.. ကြိုးစားကြည့်ပြီး သင့်အတွက် အဲဒိ အီကွေးရှင်းက အလုပ်ဖြစ်လား ပြောကြည့်ပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။5+5= သင့်အိပ်မက်ပါပဲ။
စဉျးစားမိကွမှာပါ။ စာရေးသူဟာ ရူးမြားရူးနသေလား?? ၅ နဲ့ ၅ ပေါငျးတာ ၅ ရတယျဆိုတာ မဖွဈနိုငျပါဘူး။
မေးခှနျးလေးတဈခု မေးကွညျ့ပါမယျ။ သငျ သငျ့အတှကျလကာလရှညျ စီမံကိနျးလိုအပျတယျဆိုတာ ဘယျနှခေါကျ ကွားဖူးပါသလဲ?? ပွီးတော့ အဲဒိစီမံကိနျးအောငျမွငျဖို့ အဲဒိ ကာလရှညျတဈခုလုံး အာရုံစူးစိုကျထားရမယျဆိုတာ ဘယျလောကျ ကွားဖူးပါသလဲ။ ဒီစာထဲမှာ ကြှနျတျောဟာ ငါးနှဈ စီမံကိနျးတဈခုကို ခပြွမှာ ဖွဈပွီး သငျဟာ အဲဒိစီမံကိနျးကို အောငျမွငျနိုငျသလားဆိုတာပါ ပွောပွပေးသှားမှာပါ။ အပျေါက အီကှေးရှငျးမှာ အဖွေ ၅ ဟာ သငျ့ရဲ့ ပနျးတိုငျ ဖွဈပွီး ၅ + ၅ ကတော့ ပနျးတိုငျကိုရောကျဖို့ လြှို့ဝှကျခကျြပါပဲ။
အီကှေးရှငျးက ပထမ ၅ ဟာ သငျ့ရဲ့ မိတျဆှေ၊ လုပျဖျောကိုငျဖကျ ငါးယောကျပါ။ သငျနတေို့ငျး ဆကျဆံနရေတဲ့ အရငျးနှိးဆုံးလူ ၅ ယောကျကို စာရငျးလုပျပွီး သငျနဲ့ သူတို့ ရညျမှနျးခကျြ တူသလား။ ရညျမှနျးခကျြတူရငျတောငျ တိုးတကျမှု ရှိနသေလား ကွညျ့ပါ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သငျက သငျ့အနားမှာ ရှိနသေူတှနေဲ့ ပုံစံတူ ဖွဈလာနိုငျခြေ ၁၀၀ ရာနှုနျး ရှိနလေို့ပါပဲ။ ဥပမာ သငျက ကနျြးမာ၊ ခမျြးသာ ခငျြသူဖွဈပွီး သငျ့ဘေးနညးကလူတှကေ ဆေးလိပျထိုငျဖှာပွီး တဈမိနဈလောကျ အလုပျလုပျရမှာကို ပငျြးနသေူတှေ ဆိုရငျတော့ သငျ့ပနျးတိုငျကို ရောကျဖို့ ရာနှုနျးဟာ သုညနား နီးသှားပါပွီ။
လူတျောတျောမြားမြား သူတို့ရညျမှနျးခကျြတှကေို မရောကျရတာက သူတို့ သူငယျခငျြးတှကေ သူတို့ခွထေောကျကို ဆှဲထားလို့ပါပဲ။ ရညျမှနျးခကျြတှေ သတျမှတျပွီးတာနဲ့ သငျနဲ့ ရညျမှနျးခကျြ တူသူတှနေဲ့ သငျ့ကိုယျသငျ ဝနျးရံထားလိုကျပါ။
ဒုတိယ ၅ ကတော့ သငျ နောကျဆုံးဖတျဖူးတဲ့ စာအုပျ ၅ အုပျကို သငျ့အိတျထဲ ထညျ့ထားလိုကျပါ။ အပြျောအနနေဲ့ သငျ့သူငယျခငျြးတှေ တဈခုခုအကွောငျး Complain တကျရငျ သူတို့နောကျဆုံးဖတျဖူးတဲ့ စာအုပျ ငါးအုပျက ဘာလဲဆိုတာ မေးကွညျ့ပါ။ အဖွေ ၂ မြိုး ရလာပါလိမျ့မယျ။ မမှတျမိဘူး။ ငါ့မှာ စာဖတျဖို့ အခြိနျ မရှိဘူး။
သငျ နောကျဆုံးဖတျတဲ့ စာအုပျ ၅ အုပျဟာ သငျ့ဘဝရဲ့ ပနျးတိုငျနဲ့ ဦးတညျခကျြကိုအဆုံးအဖွတျ ပေးသှားမှာပါ။ ပုံမှနျလူတဈယောကျဟာ ပြှမျးမြှ တဈနှဈကို စာတဈအုပျနှုနျးသာ ဖတျပါတယျ။ အဲဒါက ၉၅ ရာနှုနျးသော လူတှေ အသကျ ၆၅ နှဈမှာ နှမျးပါးရတဲ့ အကွောငျးရငျးပါ။ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး ကှနျပြူတာတောငျ အလုပျလုပျအောငျ ပရိုဂရမျ ရေးပေးရပါတယျ။
ကြှနျတယျေတို့ အားလုံး အမွငျ့ကို ရောကျခငျြတာပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ သငျ နတေို့ငျးဖတျနေ၊ နားထောငျနတေဲ့ အရာတှကေ သငျ ဘယျလောကျ အမွငျ့ရောကျနိုငျလဲဆိုတာ အဆုံးအဖွတျပေးနပေါတယျ။ သငျ့ရဲ့ ငါးနှဈ စီမံကိနျး ပနျးတိုငျကို အာရုံစိုကျထားပွီး သငျဖတျတဲ့ စာအုပျ ၅ အုပျ၊ သငျ့အနားက သူငယျခငျြး ၅ ယောကျက အဲဒိပနျးတိုငျကို ရောကျမရောကျ အဆုံးအဖွတျပေးသှားမှာပါ။ အောငျမွငျမှုဆိုတာ ရိုးရှငျးပမေယျ့ မလှယျကူပါဘူး။
5 +5=5.. ကွိုးစားကွညျ့ပွီး သငျ့အတှကျ အဲဒိ အီကှေးရှငျးက အလုပျဖွဈလား ပွောကွညျ့ပါ။
ကြှနျတျောကတော့ ကွိုတငျခနျ့မှနျးနိုငျပါတယျ။5+5= သငျ့အိပျမကျပါပဲ။
Previous: လိင်ကိစ္စအပြီးမှာ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ ရိုမန်တစ်ဆန်တဲ့ ကိစ္စ ၁၀ ခု
Next: (၇) ရက်အတွင်း ကိုယ်အလေးချိန် (၁၀)ပေါင် ကျသွားစေဖို့